Amerikaan bulchoota filachuutti jirti tana keessaa namii 500 tahu Miseensa Mana Marii,Senetii fi bulcha godinaatiif filama
Sadaasaa 06, 2018
Akkuma amalaa fi adaba isiittti Amerikaan yoo cufa Sadaasaa gaafa Kibxataa nama isii bulchu filatti.
Seerii kun bara 1845 asi akkanuma keessa bahe.Yoo qonnaan bulaan midhaan galfatee irraa bahe filannootti dabran.
Filannoon tanaan Miseensii Mana Marii Amerikaa 435 filan.Senetii US 100 keessaa 35 filuuf deeman.Bulchoota godina US keessaa bulchoota 36ti filama. Jarii kaan ka barii hujii isaanii hin dhumatin jechuu.
Akka amma jiruun manii marii waan gara paartii Obaamaa fa Demokiraatii deebi’u fakkaata.Senetiin US 100 keessaa Rippaabilikaan nama 50 Demokiraati ammo nama 49 qabdi.
Barucma senetii hardha nama itti filan 26 ka demokiraatiti 9 ka Rippaabilikaan. Senetii Amerikaa ganna 6 jahatti filanii miseensa mana marii ammoo ganna lama lama.
Buchootii Amerikaa ta ammaatii fi ta duriilleen gamuma gamaan akka ummatii bahee fialtu baannachuuf godina keessa yaa'an.
Doonaldi Tiraampi xuyyuura pirezidaantiin US deemuun Air Force One keessa bu’etti jala-bultii filannootiif Ohio, Indiana fi Misuurii oole.
Pirezidaantiin US ka durii Baraak Obaamaalleen guyyaa dheengaddaa fi guyyaa duraa Virgina Illinoi fi Indian oole.
“Yoo akka US biyya abadatan,biyya garaa ballattu taatu feetan bahaa filadhaa,” jedha Obaamaan.
Tiraampi ammoo paartiin “Rippaabiulikaan daarii biyya isii jabeeffattii,wanjalaa fi jeequmsa hin feetuu,akka namii cabsee daarii isitti baafatullee eeyee hin jettu,” jedha. daarii angaa qabdu feeti,wanjala hin feetu,jeequmsa hin feetu nama akkanumatti cabsee nutti yaahu hin feetu jedha
Akka amma jiruun manii marii waan gara paartii Obaamaa fa Demokiraatii deebi’u fakkaata.
Senetiin US 100 keessaa Rippaabilikaan nama 50 Demokiraati ammo nama 49 qabdi.
Filannoo baranaa nama harka 40 bahee filata jedhanii abdatan.Akkuma amalaa fi adaba isiittti filannoon Amerikaa Kibxata irra oola. Bara 1845 asi akkanuma keessa dhufte. Yoo qonnaan bulaan midhaan galfatee irraa bahe filannootti dabran.Sunuu ji’a Sadaasaa keessa.
Buchootii Amerikaa ta ammaatii fi ta duriilleen gamuma gamaan akka ummatii bahee fialtu baannatan.
Doonaldi Tiraampi xuyyuura pirezidaantiin US deemuun Air Force One keessa bu’etti kalee Ohio, Indiana,Misuurii oole.
Pirezidaantiin US ka durii Baraak Obaamaalleen guyyaa dheengaddaa fi guyyaa duraa Virgina Illinoi fi Indian oole.“Yoo akka US biyya abadatan,biyya garaa ballattu taatu feetan bahaa filadhaa,” jedha Obaamaan.
Filannoo baranaa nama harka 40 bahee filata jedhanii abdatan. Buufata 170,000 keessatti filachuuf deeman.Amerikaan bara 2020 pirezidaantii filatti.